Imimmisele yenkonzo - JPEG.to
Apha ngezantsi kukho uguqulelo olunzima lwemigaqo yethu yesingesi yenkonzo kunye nomgaqo-nkqubo wabucala wesiNgesi kwimicimbi yezomthetho zombini isebenza kuphela ngesiNgesi
Ngokungena kwiwebhusayithi kwi- https: //jpeg.to , uyavuma ukubopheleka yile migaqo yenkonzo, yonke imithetho esetyenziswayo kunye nemigaqo, kwaye uyavuma ukuba unoxanduva lokuthobela nayiphi na imithetho yasekhaya esebenzayo. Ukuba awuvumelani nayo nayiphi na yezi zinto, unqatshelwe ukusebenzisa okanye ukufikelela kule ndawo. Izixhobo ezifumaneka kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho osebenzayo welungelo lokushicilela kunye nomthetho wophawu lworhwebo.
2. Sebenzisa iLayisensi
Imvume inikezelwa okwethutyana ikopi enye yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiwebhusayithi yeJPEG.to yokujonga okwethutyana, okungathengisiyo kurhwebo kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukutshintshelwa isihloko, kwaye phantsi kweli phepha-mvume awunako:
ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathwe kwiwebhusayithi yeJPEG.to;
Eli phepha-mvume liza kupheliswa ngokuzenzekelayo ukuba uthe waphula naluphi na olu thintelo kwaye unokunqunyanyiswa nguJPEG.to ngalo naliphi na ixesha. Emva kokuphelisa ukubonwa kwakho kwezi zinto okanye ekuphelisweni kwelayisensi, kuya kufuneka utshabalalise naziphi na izinto ezikhutshelweyo ezikokwakho nokuba zikwisimo se-elektroniki okanye eshicilelweyo.
Izixhobo ezikwiwebhusayithi yeJPEG.to zibonelelwa 'njengoko kunjalo'. I-JPEG.to ayenzi siqinisekiso, ivakalisiweyo okanye ichaziweyo, kwaye oku kuyabhengeza kwaye kuhexe zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle komda, ukuqinisekiswa kwemwarhu okanye iimeko zokurhweba, ukulungela injongo ethile, okanye ukwaphula amalungelo obunikazi okanye ukwaphula amalungelo.
Ngaphaya koko, iJPEG.to ayisebenzi okanye yenza naziphi na izibonakaliso malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembeka kokusetyenziswa kwezixhobo kwiwebhusayithi yayo okanye ngenye indlela enxulumene nezixhobo ezinjalo okanye nakweziphi na iziza ezinxulumene nale ndawo.
Akuyi kubakho kwimeko apho iJPEG.to okanye abathengisi bayo beya kuba noxanduva lwawo nawuphi na umonakalo (kubandakanya, ngaphandle komda, ukonakaliswa kokulahleka kwedatha okanye inzuzo, okanye ukuphazamiseka kweshishini) kuvela ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo kwiJPEG.to Iwebhusayithi, nokuba i-JPEG.to okanye iJPEG.to igunyaziswe ngummeli waziswe ngomlomo okanye ngokubhaliweyo ngokubakho komonakalo. Ngenxa yokuba eminye imimandla ingavumeli imida kwizivumelwano ezichaziweyo, okanye umda wetyala ngenxa yomonakalo obangelwe ngenxa yoko okanye okuthe kwenzeka, oku kusenokungasebenzi kuwe.
Izinto ezivelayo kwiwebhusayithi yeJPEG.to zinokuquka ubuchwephesha, typographical, okanye iimpazamo zefoto. I-JPEG.to ayigunyazisi ukuba naziphi na izinto ezikwiwebhusayithi yayo zichanekile, zigqibelele okanye zangoku I-JPEG.to ingenza utshintsho kwizinto eziqulathwe kwiwebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo i-JPEG.to ayizibopheleli ekuhlaziyeni izixhobo.
I-JPEG.to ayiphonononganga zonke iisayithi ezinxulumene newebhusayithi yayo kwaye ayinoxanduva lokuqulathwe kuyo nayiphi na indawo enjalo. Ukufakwa kwalo naliphi na ikhonkco akuthethi ukuqinisekiswa yiJPEG.to yendawo. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi enjalo enxulumana nomngcipheko womsebenzisi.
I-JPEG.ukuhlaziya le miba yenkonzo yewebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukubotshwa nguhlobo lwangoku lwele migaqo yenkonzo.
Le migqaliselo nemiqathango ilawulwa kwaye ichazwe ngokungqinelana nemithetho ye-Connecticut kwaye ungenisa ngokungafanelekanga kulawulo olukhethekileyo lweenkundla zelo lizwe okanye indawo.
IJPEG ukuya kwi-SVG
JPG ukuya kwi-PNG
JPG ukuya kwi-SVG
JPG ukuya kwi-BMP
IJPG iye kwiJFIF
JPG ukuya kwi-ZIP
JPG ukuya kwi-DOCX
IJPEG ukuya kwi-TIFF
IJPG ukuya kwi-TIFF
Ilizwi ukuya kwiJPEG
I-PNG ukuya kwiJPEG
I-ICO ukuya kuJPEG
I-SVG ukuya kwiJPEG
BMP ukuya kwiJPEG
JFIF ukuya kwiJPEG
Ilizwi ukuya kwiJPG
I-PNG ukuya kwi-JPG
I-ICO ukuya kuJPG
I-SVG ukuya kwiJPG
BMP ukuya kwiJPG
JFIF ukuya kwiJPG
I-DOCX ukuya kwiJPEG
WEBP ukuya kwiJPG
WEBP ukuya kwiJPEG
TIFF ukuya kwiJPG
TIFF ukuya kwiJPEG
I-PSD ukuya kwiJPG
5,284 Uguquko ukusukela ngo-2020!
Ugqithile kumda wakho wokuguqula omnye ngeyure, unokuguqula iifayile zakho zibe 59:00 okanye Bhalisa kwaye uguqule ngoku.
🚀 Isici sesicelo soKhetho
☝ Ukulayisha kwe-Batch ukwenzela ukuba uhudule kwaye ulahle iifayile ezininzi ngexesha endaweni yinye